Taxol (တာဇိုး) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Taxol (တာဇိုး)
Taxol (တာဇိုး) ကဘာလဲ။
Generic Name: Taxol (တာဇိုး) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Taxol (တာဇိုး) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Taxol® သည် paclitaxel ပါဝင်သော ထိုးဆေးတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ကင်ဆာ ရောဂါ အမျိုးမျိုးကို ကုသရန် အသုံးပြုပါ သည်။ ၎င်းသည် ကင်ဆာ ဓါတုကုထုံး ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ကင်ဆာ ဆဲလ်များ ကြီးထွားမှုကို နှေးခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်ခြင်း ဖြစ်စေသည်။
Taxol (တာဇိုး) ဘယ်လိုသုံးသင့်သလဲ
ထိုးဆေးအတွက် သင်သည် အောက်ပါတို့ ပြုလုပ်သင့် သည်။
Taxol® အား ဆရာဝန် တွက်ချက်ထားသော အချိုးအစား အတိုင်း ဆေးရုံရှိ ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူမှ ထိုးပေးခြင်းကို ခံယူပါ။
Taxol® ကို မသုံးမပြုမီ တံဆိပ်ကို သေချာ ဖတ်ရှုပါ။
တံဆိပ်တွင် သင်သေချာ နားမလည်သော အချက်အလက်များ ရှိပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Taxol (တာဇိုး) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Taxol® ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်အလင်း နှင့် စိုထိုင်းမှုတို့မှ ကင်းဝေးအောင် သိမ်းဆည်းရမည်။ ဆေးပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Taxol® ကို ရေချိုးခန်း သို့မဟုတ် ရေခဲ သေတ္တာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။
Taxol® တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ဆေး၏ ဘူးကို အမြဲစစ်ရန် အရေး ကြီးသည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရောင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးများအားလုံးကို ကလေးနှင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာနေရာတွင် ထားပါ။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Taxol® ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Taxol (တာဇိုး) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Taxol® ကို မသုံးမီ သင့်တွင် အောက်ပါတို့ရှိပါက ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။
Taxol® ပါသော အရာများကို ဓါတ်မတည့်ခြင်း
အခြား ကျန်းမာရေး အခြေအနေများရှိခြင်း၊ Taxol® နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သော ဆေးများ သုံးခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Taxol (တာဇိုး) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်စဉ် တွင် Taxol® သုံးလျှင်ရနိုင်သော အန္တရာယ်များကို ပြည့်စုံစွာ လေ့လာထားခြင်း မရှိပါ။ Taxol® မသောက်မီ ဖြစ်နိုင်သော အကျိုး ကျေးဇူးနှင့် အန္တရာယ်ကို ချိန်ညှိရန် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။
Taxol® သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစား အသောက် နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက် အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် D ရှိသည်။
Paclitaxel ကို မိခင်နို့အတွင်း စွန့်ထုတ်သလား မသိရှိပါ။ ဆေး များစွာသည် မိခင်နို့တွင် စွန့်ထုတ်နိုင်သော်ကြောင့် နှင့် နို့စို့ ကလေးငယ်တွင် ပြင်းထန်သော ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော် ကြောင့် မိခင်များသည် paclitaxel မသောက်မီ နို့တိုက်ခြင်းကို ရပ်တန့်သင့်သည်။
Taxol (တာဇိုး) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အခြားဆေးများ သုံးခြင်းကဲ့သို့ပင် Taxol® သုံးခြင်းသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကို ဖြစ်စေသည်။ အများစုသည် အဖြစ် နည်းပြီး ဖြည့်စွက် ကုသမှု မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဤဆေး သုံးပြီးနောက် ပြဿနာတစ်ခုခု ဖြစ်ပါက ဆရာဝန်အား တိုင်ပင်ရန် အရေးကြီးသည်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကို အောက်တွင် စာရင်းပြုစုထား သည်။
အရေပြား နီရဲခြင်း၊ နာခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အရောင် အဆင်း ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရေပြား တုံ့ပြန်မှုများ
သွေးအားနည်းသည့် လက္ခဏာများ ( ဥပမာ- ပုံမှန် မဟုတ်ဘဲ မောပန်းခြင်း၊ အရေပြား အရောင်ဖျော့ တော့ခြင်း)
လက်မောင်း၊ ခြေထောက် နာခြင်း၊ နီရဲခြင်း၊ ရောင်ရမ်း ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း
ခြေသလုံး နာခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ထိပါက ပူနွေးခြင်း
မကြာခဏ ပျို့တက်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း
အစာအိမ်/ ဗိုက် အောင့်ခြင်း
မျက်လုံး/ အရေပြား ဝါခြင်း
အမြင် / အကြား ပျက်ယွင်းခြင်း
လက်/ ခြေ ထုံခြင်း၊ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ခံစားရခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Taxol (တာဇိုး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Taxol® သည် သင်လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။
Dalfopristin, Epirubicin, Fosphenytoin, Lapatinib, Phenytoin, Quinupristin Abiraterone Acetate, Adenovirus Vaccine Type 4, Live,Adenovirus Vaccine Type 7, Live,Aprepitant
,Bacillus of Calmette and Guerin Vaccine, Live, Bexarotene,Carbamazepine , Ceritinib; Infliximab, Influenza Virus Vaccine, Live, Ketoconazole, Measles Virus Vaccine, Live,Mitotane, Mumps Virus Vaccine, Live,Nilotinib,Pazopanib,Piperaquine,Pixantrone, Primidone,Rubella Virus Vaccine, Live,Siltuximab, Smallpox Vaccine, Cisplatin,Cobicistat,Crizotinib, Dabrafenib,Deferasirox,Doxorubicin,Doxorubicin Hydrochloride Liposome,Eslicarbazepine Acetate, Ethinyl Estradiol, Fluconazole, St John’s Wort, Testosterone, Tretinoin,Typhoid Vaccine, Valspodar,Varicella Virus Vaccine, Yellow Fever Vaccine, Fosaprepitant,Idelalisib
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Taxol (တာဇိုး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Taxol® သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Taxol (တာဇိုး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Taxol® သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေ အနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။ သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။ ဥပမာ-
Peripheral neuropathy ( ခြေ၊ လက် နာကျင်ခြင်း၊ ထုံခြင်း သို့မဟုတ် စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ဖြစ်ခြင်း)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Taxol (တာဇိုး) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Taxol ဆေး အချိုးအစားအကြောင်း ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ပါ။
အချို့ရောဂါများတွင် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏအချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
ထပ်ပေါင်းကုသမှု အနေဖြင့် ထောက်ခံထားသော ပမာဏမှာ သွေးကြောတွင်းသို့ 175mg/m2 ကို ၃ ပတ်တိုင်း ၃ နာရီကြာ ထိုးသွင်းရန် ဖြစ်သည်။ doxorubicin ပါဝင်သော ဓါတုကုထုံးနှင့် အစဉ်အလိုက် ၄ခါ ပေးရမည်။
ကင်ဆာအတွက် အစပိုင်း ဓါတုကုထုံး မအောင်မြင်ပါက သို့မဟုတ် ထပ်ပေါင်း ဓါတုကုထုံး ၆လအတွင်း ရောဂါ ပြန်ဖြစ် ပါက ထောက်ခံထားသော ပမာဏမှာ သွေးကြောတွင်းသို့ 175 mg/m2 ကို ၃ ပတ်တိုင်း ၃နာရီကြာ ထိုးသွင်းရန်ဖြစ်သည်။
ထောက်ခံထားသော ပမာဏမှာ သွေးကြောတွင်းသို့ 135 mg/m2 ကို ၂၄ နာရီကြာ ထိုးသွင်းရန်နှင့် cisplatin ကို ၃ ပတ်တစ်ခါ ဖြစ်သည်။
အရင်က မကုသထားသော သားအိမ်ကင်ဆာ လူနာများ အတွက်။
ထောက်ခံထားသော ပမာဏမှာ သွေးကြောတွင်းသို့ 175mg/m2 ကို ၃ ပတ်တိုင်း သုံးနာရီကြာ ထိုးသွင်းရန် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် cisplatin သုံးပါ။ သို့မဟုတ် သွေးကြောတွင်းသို့ 135 mg/m2 ကို ၃ ပတ်တိုင်း ၂၄ နာရီကြာ ထိုးပါ။ ထို့နောက် cisplatin သုံးပါ။
အရင်က ကုသမှု ခံဖူးသော သားအိမ်ကင်ဆာလူနာ များအတွက်။
ထောက်ခံထားသော ပမာဏမှာ သွေးကြောတွင်းသို့ 175mg/m2 ကို ၃ပတ်တိုင်း ၃နာရီကြာ ထိုးသွင်းပါ။ သို့မဟုတ် သွေးကြောတွင်းသို့ 135mg/m2 ကို ၃ပတ်တိုင်း ၃ နာရီကြာ ထိုးသွင်းပါ။
ကလေးတွေအတွက် Taxol (တာဇိုး) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Taxol (တာဇိုး) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Taxol® ကို အောက်ပါ ပုံစံ၊ ပြင်းအား များဖြင့် ရနိုင်ပါ သည်။
Concentrate, သွေးကြောတွင်း၊ ၁၀၀ မီလီဂရမ်/ ၁၆.၇ မီလီလီတာ (၁၆.၇ မီလီလီတာ)။ ၃၀ မီလီဂရမ် / ၅ မီလီတီတာ (၅မီလီလီတာ)။ ၁၅၀ မီလီဂရမ်/ ၂၅ မီလီလီတာ။ ၃၀၀ မီလီဂရမ်/၅၀ မီလီလီတာ ( ၅၀ မီလီလီတာ)။
Taxol® သောက်ရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် သောက်ပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်ရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်ပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မသောက်ပါနှင့်။